Fiantsenana ao Sri Lanka ~ Journey-Assist - Inona no hividy ao Sri Lanka
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fiantsenana ao Sri Lanka
Fiantsenana ao Sri Lanka
Endri-javatra miantsena any Sri Lanka
Amin'ny fivarotana samihafa amin'ity firenena ity, ny vokatra mitovy dia azo amidy amin'ny vidiny samihafa. Noho izany, raha misy ny fotoana, dia asaina mandehandeha amidy maromaro ianao alohan'ny mangataka vidiny. Ny fivezivezena any amin'ny bazao sy amin'ny fivarotana kely dia azo atao sy ilaina, fa tsy mendrika izany raha manao fihetsika mamohehatra loatra. Tokony hiondrana amin'ny intonation am-pitiavana sy tsiky ianao mba hampihenana ny vidiny voalohany.
Ny vahiny fotsy eto dia raisina amin'ny alàlan'ny famaritana ireo olona manan-karena izay, noho izany dia tsy mandoa na inona na inona hividianana zavatra amin'ny vidiny miakatra. Na izany aza, ny mpivarotra Sri Lankan dia mandatsaka hatramin'ny 30% amin'ny vidiny voalohany mandritra ny fotoana hanaovana ny tolotra. Ny mpividy dia natokana hampisaraka ny vidiny arakaraka, ampio 15% hafa ary alao ny vokatra azo, asehoy eo an-tanany ilay vola vidin'ny mpivarotra ary aleo miala amin'ny fivarotana (na avelao ny toeran'ny tsena). Ny mety ho tratry ny mpivarotra hiakatra aminao ary milaza izy fa manaiky hivarotra amin'ny vidiny dia avo be.
Ny fivarotana any Sri Lanka dia manolotra fitaovam-panodinana miloko marika, knitwear ary hoditra avo lenta. Ireo entana vokarina any an-toerana ireo dia malaza amin'ny vidiny ambany sy ny vidiny mora. Ohatra, T-shirt landihazo mahazatra mitentina $ 3, jeans $ 7, kapa hoditra $ 15. Ny zavatra ataon'ireo mpanamboatra eoropeana dia mazava ho azy lafo kokoa.
Ny ankamaroan'ny mpivarotra any Sri Lanka dia tsy mahay miteny anglisy fotsiny.
Ny ankamaroan'ny fivarotana eto dia miasa amin'ny andro 10 ka hatramin'ny 20, amin'ny asabotsy - manomboka amin'ny 9:30 ka hatramin'ny 13, ary mihidy amin'ny alahady. Fa any amin'ny toerana fivarotana malaza dia maro no misokatra lava kokoa, matetika amin'ny faran'ny herinandro.
Ireo fivarotana any Sri Lanka
Duplication sy Galle any Colombo no lalana miantsena roa any Sri Lanka. Any ianao dia afaka mitsidika fivarotana maro, toeram-pivarotana sy fivarotana lehibe izay mivarotra akanjo, kiraro, kojakoja, kojakoja an'ny ankizy ary firavaka.
Ny House of Fashion dia foibe fivarotana lehibe ao an-drenivohitra Sri Lankan. Manolotra akanjo isan-karazany ho an'ny rehetra (lehilahy, vehivavy, ankizy) amin'ny habeny rehetra, ary koa ny kilalao, entana fanatanjahantena, entana momba ny tokantrano.
Romafour dia foibe fivarotana lehibe indrindra any Colombo, izay misy hatrany ny fisafidianana lamba, kiraro, entana ho an'ny ankizy, firavaka, haberdashery, kojakoja.
Odel - Toeram-pivarotana any Colombo. Ao anatin'izany ny departemanta maro ny fitafiana, kiraro, kojakoja miaraka amin'ny vidiny mora vidy. Eo amin'ny fananganana afovoany ihany koa dia misy kafe izay ahafahanao miala sasatra aorian'ny fandehanana any amin'ireo magazay.
Magestic City dia toeram-pivarotana iray hafa any Colombo, izay fantatra amin'ny fanafohezana hoe "MS". Namboarina voalohany tamin'ny foibe fivarotana sy fialamboly tao an-drenivohitr'i Sri Lankan izy. Ao anatin'ny tranobeny dia misy ny fivarotana mivarotra akanjo, kiraro, souvenir, firavaka, vokatra sakafo. Na dia amin'ity tranombarotra fivarotana ity aza dia misy kafe sy trano fisakafoanana ampy intsony.
Barefoot dia fivarotana iray any Colombo izay manolo-tena manokana momba ny fivarotana asa tanana. Aminy dia ny fisianana zavatra ao amin'ny orinasa kely. Ny vondrona mpamorona miasa ao dia mamorona vokatra tsy manam-paharoa amin'ny lamba noforonina avy amin'ny akora voajanahary. Ity tranombarotra ity dia manolotra akanjo (ao ny sarisà sy sarongs), kitapo ary zavatra mahafinaritra hafa. Tranonkala fitehirizana: barefootceylon.com
NoLimit dia rojo fivarotana mivarotra akanjo lamaody. Naparitaka nanerana ny firenena. Tranonkala: nolimit.lk. Ny tombony - fidina malalaka sy vidiny mora. Ny kalitaon'ny zavatra azo antsoina hoe salanisa.
Ny Food City dia rojo fivarotana lehibe amin'ny tsenambarotra misy magazay maro manerana ny firenena. Hita any amin'ny tanàna rehetra ny fivarotana ity tamba-jotra ity ary manavaka ny fividianana vokatra lehibe indrindra.
Keells Super dia rojo toeram-pivarotana lehibe iray miaraka amin'ny vokatra sakafo, ny mpifaninana lehibe amin'ny Food City. Tena mivelatra be koa ny assortment.
Arpico no rojo fivarotana fahatelo izay misy sakafo sy kojakoja tsy ilaina amin'ny sakafo.
Stone & String dia rojo fivarotana firavaka sy vatosoa. Tranonkala: vato-n-string.com
Ny lakilenam-bohitra lehibe amin'ny firenena
Any Colombo dia misy tsenan-tsambo lehibe any an-tsena Pettah. Eo amin'ny kianja lehibe iray dia misy baraza, izay zary làka eo anelanelan'ny laharana feno entana. Taratra marevaka sy marevaka Sri Lankan, zava-manitra, legioma, voankazo, akanjo, kiraro atolotra no atolotra eto. Ao amin'ny faritra avaratra-atsin'ity tranobe ity ity dia misy fikaontena izay misy fivarotana firavaka sy magazay misy firavaka misy ny akanjo nasionaly mifantoka.
Inona no mendrika mividy ao Sri Lanka
Ny asa tanana eto amin'ity firenena ity dia mivelatra tsara. Afaka mividy maro isan-karazany amin'ny souvenir mahafinaritra toy ny saron-tava, lovia seramika, batik, kilalao hazo.
Ireo saron-tava vita amin'ny hazo, nolokoina tsara tarehy an'ny Sri Lankan masters, dia tena malaza amin'ny mpizahatany. Ny foibem-parany amin'ny fanamboarana saron-tava ireo dia Ambalangoda. Fa amidy manerana an'i Sri Lanka izy ireo.
Ny sarin'ity firenena ity dia olo-malaza elefanta. Ny tsara indrindra amin'izy ireo dia vita amin'ny ebony. Ny lokon'ny sarivongana toy izany dia mijanona tsy miova na dia misy fifanolanana mafy aza.
Manome ny Cala Paul Art Fair i Colombo isan-taona. Manangona mpanakanto marobe manerana an'i Sri Lanka izy izay miezaka mivarotra ny hosodoko eto. Ny mpanao hosodoko malaza indrindra amin'ity firenena ity dia mety antsoina hoe Richard Gabriel, Mukhened Kader, Lionel Wendt. Ny fividianana tsara amin'ny fahatsiarovana an'i Sri Lanka dia mety ho kapila miaraka amin'ny mozika eo an-toerana.
Ny fanomezana tsara ho an'ny tenanao sy ny namanao dia zavatra avy amin'ny vokatra textile Sri Lankan. Afaka mahita mora foana amin'ny akanjo isan-karazany, lambanina, lambam-pandriana ianao. Izay mpizahatany rehetra afaka mifidy zavatra ho azy.
Samy nahare momba ny dite Ceylon malaza (bebe kokoa momba ny dite Sri Lanka). Ny marika malaza indrindra aminy dia Mlesna sy Dilma. Amidy any Sri Lanka any amin'ny fivarotana lehibe isan-karazany. Ny mpandraharaha manaitaitra indrindra dia manandrana mividy dite ao an-toerana mandritra ny fitsangatsanganana amin'ireny toeram-pambolena ireny izay amboarina, ary amin'ireo orinasa izay amboarina.
Ity dia vokatra iray hafa izay nitondra laza malaza eran-tany tany Sri Lanka. Ny Rubies, safira, amethyst, topazes, aquamarines, tourmaline ary vato hafa amidy eto amin'ity firenena ity amin'ny vidiny mora. Ny toerana tsara indrindra hividianana azy ireo dia ny tanànan'i Ratnapura. Ity no ivon'ny famokarana firavaka. Ny mpandraharaha amin'ny firavaka dia mahazo tombontsoa tsy mividy azy ireo ihany, fa hijery ihany koa ireo fizotran'ny fitrandrahana sy fanodinana vato. Ao Ratnapura, ny tranombarotra firavaka dia hita na aiza na aiza, ary isan'andro ny 9 ka hatramin'ny 14 ao amin'ity tanàna ity dia misy haingo amin'ny vato firavaka, izay ahafahanao mividy azy ireo mora vidy kokoa.
Ho an'ireo izay tsy manam-pahaizana manokana momba io sehatra io dia sokajiana tsy ilaina ny mividy vato amin'ny tanana, satria amin'ity tranga ity, matetika ny mpivarotra dia tsy manome antoka. Ny mpizaha tany dia tokony handeha any amin'ny fivarotana izay famoahana ny fizahana sy fanamarinana firavaka. Ho an'ny indrindra, any Colombo, dia misy ny fivarotana ireo Colombo Jewellery Stores (adiresy: 1 Alfred House Gardens, Colombo 3) ary Zam Gems.
zava-manitra mihatra amin'ny vokatra ihany koa nampahalaza ity firenena ity (ny zava-manitra rehetra any Sri Lanka). Ny safidy lehibe indrindra any Sri Lanka dia manolotra fivarotana any amin'ireo zaridaina manitra izay miainga avy any Matale ka mankany Dambulla. Tsara homarihina ny paiso eto an-toerana, voanjo, kanelina, ginger, cardamom, tamarind, vanilla, cloves, turmeric, coriander ary, mazava ho azy, kari. Tena malaza amin'ireo mpizahatany, ohatra, ny fivarotana Utuwankanda, ao amin'ny tanànan'i Mawanella, izay hita eo amin'ny làlan'ny Colombo-Kandy. Mivarotra zava-manitra sy menaka manitra azon'ny avy amin'ny zavamaniry eo akaikin'ny tsenan'io. Ary koa, ny mpividy dia mandamina fitsangatsanganana an-jaridaina, manome lahateny kely momba ny fampiasana zava-manitra isan-karazany any Ayurveda, manatanteraka massage ao amin'ity Ayurveda ity. Ity dia iray amin'ireo toerana vitsy any Sri Lanka ivelan'ny tanàn-dehibe izay azo atao ny fandoavana ny karatra.
Avy any Sri Lanka Voarara ny manondrana tsy misy fahazoan-dàlana manokana ireto vokatra manaraka ireto:
Vokatra vita amin'ny ivoara.
Vatosoa tsy voatsabo sy sarobidy tsy voatsabo.
Maherin'ny 2 kg dite amin'ny olona iray.
Maherin'ny 3 litatra ny zava-pisotro misy alikaola isan'andro.